ကြွက်တကောင်နဲ့ လူ ၅ယောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကြွက်တကောင်နဲ့ လူ ၅ယောက်
ကြွက်တကောင်နဲ့ လူ ၅ယောက်
Posted by ဆူး on Jul 27, 2011 in My Dear Diary | 22 comments
ဆူး စိတ်ကူး ကြွက် တကောင် နဲ့ လူ ၅ယောက်
တနေ့ ညနေပိုင်း ပျင်းပျင်း ရှိတာနဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုင်ကို သွားလည်တယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူငယ်ချင်း ဆိုင်မှာ မဖိတ်ပဲ လာတဲ့ ဧည့်သည် ရောက်နေလို့ တော်တော် အလုပ်ရှပ်နေပါတယ်။ မဖိတ်ပဲ လာတဲ့ သူကတော့ ကြွက် တကောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ညနေစောင်း ဆိုင်တခါး ကြားထဲကနေ ဆိုင်ထဲကို အပြေးအလွား ၀င်ရောက်ပြီး အိမ်ဆောက်ဖို့ ၀င်လာတဲ့ ကြွက်တကောင်နဲ့ သတ္တိခဲ လူ ၄ယောက် ဆူး အပါအ၀င် ၅ယောက် ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကလည်း အသန့်အပြန့်ကြိုက်တဲ့ သူဆိုတော့ ကြွက် ခြင် ယင်တွေ မရှိအောင် သန့်ရှင်းရေး ဦးစားပေးတယ်။ ဆူး အမှားပေါ့.. ဆိုင်ထဲ ၀င်သွားတာ တံခါးကို သေချာ မပိတ်မိပဲ သတိမထားမိလိုက်ဘူး… ဆိုင်မှာ ထိုင်စကားပြောနေရင်းနဲ့ ကြွက်တကောင် ရုတ်တရက် ပြေးဝင်လာတာ မြင်တဲ့အခါ.. ဆိုင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်း ၃ယောက် အသံထွက်လာတယ်.. ဟဲဟဲ.. ဟိုမှာ ကြွက်.. ကြွက်..ပြေးဝင်သွားပြီ ဟိုထောင့်ကို.. အမြန်လိုက်ဖမ်း.. ဆိုတဲ့ အသံ ကြားတော့ ဘာများ ဖြစ်လဲလို့.. စကားပြောနေတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့.. အားလုံး တံမြက်စည်း ကိုယ်စီ နဲ့ ပုံစံကတော့ တွေ့တာနဲ့ အသေရိုက်တော့မဲ့ ပုံစံပါပဲ။ အဲဒီမှာ တယောက်က အတွင်းခန်းထဲ မ၀င်အောင် အမြန်ပိတ်ကာထား.. အထဲမှာ မုန့်တွေ ရှိတယ် ဆိုပြီး သတိပေးတာ ကြားလိုက်ပါတယ်။ ကြွက်ကိုက်သွားရင် ရိက္ခတွေ ဆုံးရှုန်းကုန်မယ် ဆိုပြီး တံခါး မရှိတဲ့ အတွက် ခုံတွေကို ချပြီးတော့ ကြွက် ဖြတ်မပြေးနိုင်အောင် လမ်းပိတ်လိုက်တယ်။ စက္ကူပုံးခွံတွေ ရှာဖွေ ထုတ်လာပြီး ပိတ်လိုက်တယ်။ ကြွက်ပြေးဝင်သွားတဲ့ နေရာကို စောင့်ကြည့်တဲ့ သူက ဟေ့.. ဒီမှာ ငါတွေ့တယ် မလှုပ်ဘူး ငြိမ်နေတယ်။ နင်တို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား တခြား ၂ယောက်က အေး ငါတို့ အတွင်းကို ဆက်မ၀င်နိုင်အောင် ပိတ်ထားလိုက်ပြီ။ ဆိုတဲ့ အသံကြားတဲ့ အခါ အထွက်အ၀င် တံခါးမကို အကျယ် ဖွင့်ပြီးတော့ ကြွက်ကို တံမြက်စည်းနဲ့ လိုက်ခေါက်ပြီး အသံပေးတော့ ကြွက်ခမျှာ ကြောက်အား လန့်အားနဲ့ ဘယ်ပြေးရမှန်း မသိ ဟိုပြေး ဒီပြေးနဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ သို့သော် လာလမ်းအတိုင်း တံခါး အကျယ် ဖွင့်ထားပေမဲ့ လုံးဝ ပြန်မထွက်ပဲ အတွင်းဘက်ကို သာ ဦးတည်ပြီး ဟိုကြား ပြေးခိုလိုက် ဒီကြား ပြေးခိုလိုက်.. ကြွက်နောက်က လူက လိုက်ခြောက်ရင်းနဲ့ ဘယ်ပြေးရမှန်းမသိ မျက်စိလည်မူး နောက်နေတဲ့ ကြွက်ကလေးက လူတွေဆီကို တည့်တည့် ဦးတည်ပြီး ပြေးလာတယ်။ တိုက်ရည်ခိုက်ရည် အပြည့်အ၀ ရှိတဲ့ တံမြက်စည်း ကိုင်ထားတဲ့ ကောင်မလေးများ တန်းစီပြီး ထွက်ပြေးတော့တာပါပဲ။ ကြွက်လာပြီ ဟေ့ ဆိုပြီး အနောက်ဆုတ်ပြေး.. ကြွက်ကလည်း တိုးလို့ရမဲ့ ချောင်တွေ့ရင် တိုး.. ဒီလိုနဲ့ ကြွက်က တည့်တည့် တိုးတာ မဟုတ်ရင် ဒုတ်နဲ့ လိုက်ရိုက်.. နောက်ဆုံးတော့.. ကြွက်လည်းမူး လူလည်း မူး.. ဆိုင်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ကြွက်တကောင်နဲ့ စိန်ပြေးတမ်း ကစားသလို ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ ထိုမြင်ကွင်းက တော်တော် ရီစရာလည်း ကောင်းလှတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ဆိုင်ရှင် သူငယ်ချင်းကလည်း သတ္တိ သိပ်ကောင်းပုံကတော့ ရှယ်ပါပဲ။ ကြွက်ပြေးလာတဲ့ အခါ သူ့ဆီ တည့်တည့် ရောက်လာတာ သိသိချင်း မျက်စိမှိတ် လက်သီးဆုပ်ပြီး အားးးးးး အော်ပြီး ခြေထောက် နှစ်ချောင်း စုံ ခုံနေပါတယ်။ ဟဲ့ ဘာဖြစ်တာလဲ ဘာဖြစ်တာလဲ သူကို သတင်းမေးတော့.. မျက်စိ မှိတ်လျက်က ဖွင့်ပြီးတော့ အောက်ကို ကြည့်ပြီး လက်ညိုးထိုးပြတယ်။ အပြေးသန်တဲ့ ကြွက်တကောင် ပြားပြားဝပ်လို့ မလှုပ်မရှက် ငြိမ်နေတာ တွေ့ရပါတော့တယ်။
ကြွက်လိုက်ဖမ်းတဲ့ မြင်ကွင်းနဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ရီမောရင်း လုပ်နေကြပေမဲ့ ဘာမသိ ညာမသိ ကြွက်ကလေး တကောင် လမ်းပျောက်ပြီး ဟိုပြေး ဒီပြေးဖြစ်ရတဲ့ အနေအထားနဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ် ဆိုရင် လူတွေက ရယ်မောရင်း လိုက်ရိုက်ကြပေမဲ့ ကြွက်တကောင် အနေနဲ့ ဆိုလျှင် အသက်နဲ့ ရင်းပြီး လွတ်မြောက်ရာ ရှာရသလို ဖြစ်နေတယ်။ လာလမ်းကိုပဲ မမှတ်မိတာလား.. အတွင်းမှာပဲ ကောင်းစွာ ပုံးခို နေချင်လို့လား။ အစာရေဆာ လွယ်လင့်တကူ ရနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့လားတွေးမိတယ်။
ကြွက်က ပြေးလာလိုက် လူက ထွက်ပြေးလိုက် ဖြစ်ရင်းနဲ့ ရယ်ခဲ့မိပေမဲ့.. ကြွက်ကလေး နေရာက တွေးကြည့်ရင် ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ကြောက်စိတ်တွေ မွန်ပြီး သေမှာ ထိတ်လန့်နေမှာ အမှန်ပဲ။ အားလုံးကတော့ သတ္တ၀ါ တခု ကံတခု ဆိုတဲ့ အတိုင်း..သတ္တ၀ါတွေက ကိစ္စတွေ များစွာ လုပ်မိနေကြတယ် လုပ်မိနေကြတဲ့ ကိစ္စတိုင်းဟာ ကောင်းဖို့ လုပ်မိသလား ဆိုးဖို့ လုပ်မိသလား ဆိုတာ မသိနိုင်ကြဘူး။ ဥပမာ အားဖြင့် ကျောက်တူးမယ် ဆိုပြီး ထွက်သွားတယ် သူဌေး မဖြစ်ခင် ငှက်ဖျားဖြစ်လို့ သေတဲ့ သူတွေလည်း မနည်းဘူး။ ထို့အတူ လမ်းဘေး ကွမ်းယာသည်က ယနေ့ ရွှေသူဌေး ဖြစ်မယ်လို့ ကွမ်းယာ ရောင်းတဲ့ အချိန်မှာ တွေးမိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းသည်လည်း နွားခြေရာ နောက်ကို လိုက်တဲ့ လှည်းဘီးလို ထပ်ချက်မခွာ လိုက်ပါပြီး သင်ပြုသည့် ကံသည် သင့်ထံ ပဲ့တင်လာအုန်းမည် ဆိုတဲ့ စကားလေးကို သတိရမိပါတော့သည်။
သင်ပြုသည့် ကံသည် သင့်ထံ ပဲ့တင်လာအုန်းမည် ဆိုတဲ့ စကားလေးကို အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ ။ လက်ခံပါတယ် ၊ လိုက်နာခဲ့ပါတယ် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေ ကိုးကွယ်ရာ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့တာပါ ။ အနှေးနဲ့ အမြန် ၊ ဒီဘ၀ နဲ့ နောင်ဘ၀ အကျိုးပေးလာမယ် ဆိုတာကို ရှင်ဆန္ဒာဓိက ရဲ့တရားစာအုပ် မှာ ဖတ်ဖူးပါတယ် ။ ကောင်းသော အလုပ် ကို ဘာပဲလုပ်လုပ် ကောင်းစေချင်တဲ့ စိတ် ၊ စိတ်ထဲမှာ သန့် နေမယ် ဆိုရင် ကုသိုလ်တွေ အများကြီး ရတယ် လို့ သိရပါတယ် ။ နောက်ပြီး စာရေးဆရာ ဆိုတာ လူထု ကို အသိပညာ ၊ ကောင်းရာ ကောင်းနိုး ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်၊ ခံစားမှု ရသ ဆိုတာတွေ ကို ပေးနေတဲ့ သူတွေ ဆိုတာ လည်း သိရပါတယ် ခင်ဗျား
ကျွန်မတို့မောင်နှမတွေလဲ ကြွက်တစ်ခါဖမ်းဖူးတယ် … ကြွက်ဝင်သွားတာသေချာတာနဲ့ အပေါက်ပိတ်ပြီးဖမ်းကြတာ … ကြွက်ကသေးတော့ ကျွန်မမောင်လေးက လက်နဲ့အုပ်ပြီးဖမ်းလိုက်တယ် အဖမ်းမတော်ပဲ အမြီးကိုပဲ ကိုင်မိသွားတယ် … မိပြီကွဆိုပြီး ဆွဲမလိုက်တာ ကြွက်က သူ့အမြီးဖက်ပြန်လှည့်ပြီး လက်ကိုကိုက်ထည့်လိုက်တာ ကံကောင်းလို့ လက်ချောင်းပြတ်မထွက်တယ် … သွေးဖြိုင်ဖြိုင်ကျလို့ ဆေးခန်းကိုတောင်ပြေးလိုက်ရသေးတယ် …
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၆၅၀က… ဥရောပတခွင် လူအသက်တွေနှုတ်သွားတဲ့ ..လူသားသမိုင်းမှာ အသက်အများဆုံးဆုံးရှုံးတဲ့…( Black Death)ပလိပ်ေ၇ာဂါရဲ့ အဓိက တရားခံက အဲဒီကြွက်ပဲ…။
ဒီခေတ်ကျတော့… ကြွက်ဟာ သွေးနွေးသတ္တ၀ါမို့.. လူအစား ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာ…စမ်းသပ်ခံအဖြစ်.. စမ်းသပ်ကြရင်း.. ကြွက်ကို ..လူ့လောကအကျိုးရှိတဲ့အကောင်ဖြစ်အောင် လူတွေကပဲ ပြောင်းယူလိုက်ကြတယ်..။
(သာမန်လူတွေအနေနဲ့.). ကြွက်ကိုတွေ့ရင်..တွေ့တဲ့နေရာမှာ… အထူးတလည်လုံ့လစိုက်ထုတ်ပြီးသတ်…။
there was 75 million that was killed from the well known disease called the black death…
There were 75 million people that were killed by the Black Death, also known as the Bubonic Plague. The Black Death was in reference to one of three related diseases, one of which was the Bubonic Plague. There is no real evidence of the total body count. They are educated guesses, only that, conjecture. Though rough estimates, they are probably still close enough to inform people.
It wiped out roughly 1/3 of Europe’s population, which means it killed about 25-50 million just there.
Read more: http://wiki.answers.com/Q/How_many_people_died_during_the_Black_Death#ixzz1TGhCb7Oo
ရုံးမှာ ကြွက်ဖမ်းနည်းကတော့ ရက်စက်ပါ့ …. ။ ကြွက်ကပ်ကော်နဲ့ ကပ်ဖမ်းတာလေ… ။
ခိုင်းတဲ့လူက ခိုင်းတော့ … ကော်နဲ့ ထောင်ခြောက်ဆင်တာကို အကြမ်းအလုပ်သမားက လုပ်ရတယ် … ။ ကြွက် တနေ့ ဘယ် နှစ်ကောင်ရလဲ ဆိုတဲ့ စာရင်းတောင် လုပ်ထားသေးတယ် … တကယ့်ကို အာရုံပဲ
ကိုယ်တွေက မြင်နေရတာ စိတ်မချမ်းသာဘူး…ကြွက်က မသေမရှင်နဲ့ … အဲ့လို ကော်နဲ့ ကပ်နေတာ … နောက် အစာမစားနိုင်မှ တဖြည်းဖြည်း သေသွားမှာ ။
အလုပ်မှာကတော့ တစ်ခါဂိုထောင်ထဲမှာ ကြွက်တွေသောင်းကျန်းနေတယ်ဆိုတော့ ဂိုထောင်က လူက လှမ်းမှာတယ် ကြွက်သတ်ကော်တော့ မပို့ပေးပါနဲ့ Happy ချောကလတ်ပြားတွေသာ မျာများဝယ်ပို့ပေးလိုက်ပါတဲ့ သူက စားမိတဲ့ ကြွက်ကို သေစေနိုင်ပြီး အပုပ်နံ့ လည်း မထွက်တော့ ကြွက်သေ လိုက်ကောက်ရတဲ့ တာဝန်တစ်ခုလျော့လို့ပါတဲ့လေ ….
etone ပြောတဲ့ နည်းနဲ့ ကြွက်ဖမ်းတာလုပ်ဖူးတယ်၊ ကိုယ်တိုင်တော့မဟုတ်ဘူး၊ လုပ်တဲ့သူကို မတားပဲထောက်ခံတာ။ အဆောင်မှာနေတုန်းက ညညဆို တံခါးအောက်ကနေ ကြွက်ဝင်ဝင်လာလို့ သူငယ်ချင်းက စာရွက်တရွက်မှာ ကြွက်ကပ်ကော်တွေသုတ်ပြီး တံခါးအောက်မှာ ချထားတာ၊ ညလဲကျရော ကြွက်က တံခါးအောက်ကနေ စာရွက်ပေါ်ဖြတ်ပြေးပြီး ၀င်လာတာ ကော်တွေနင်းမိပြီး ကပ်သွားပါလေရော။ ကြွက်က ရုန်းလေ သူ့ခန္တာကိုယ် နဲ့ ကော်သုတ်ထားတဲ့ စက္ကူနဲ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်ပြီး တကိုယ်လုံးကော်တွေ ကပ်လေပဲ။
အဲဒီအချိန်ကျမှ လုပ်မိတာ နောင်တရသွားတယ်၊ ကြည့်တောင်မကြည့်ရက်တော့ဘူး၊
ဒါနဲ့ပဲ သူငယ်ချင်းက စက္ကူနဲ့ လုံးထွေးကိုင်ပြီး ပြူတင်းပေါက်ကနေ ပစ်ချလိုက်ရ တယ်။ နောက်ဘယ်တော့မှာ ကြွက်ကပ်ကော်မသုံးတော့ဘူး။
အင်တာနက် သတင်းဆိုက်တခုထဲက ဆောင်ပါးတပုဒ်ကို သွားသတိရတယ်။ ဆောင်းပါးရေးသူ ထောင်ထဲရောက်တော့ မျောက်ဝံလို ပုပုကွကွ ပုံပျက်ပန်းပျက် လျောက်သွားနေတဲ့ လူလတ်ပိုင်း တယောက်ကို တွေ့မိလို့ သူ့အကြောင်းသိရတာ အဲဒီလူက ငယ်စဉ်က နာမည်ကြီးရခိုင်သူပုန်တဦး၊ သူ့ခေတ်သူ့နယ်မှာတော့ ပျိုမေကြိုက် လူငယ်လူချော သတ္တိခဲ သူပုန်ဗိုလ်တဦးပေါ့။ နောက်ပိုင်းသူ့ကို အစိုးရစစ်တပ်ကမိပြီး ထောင်နှစ်ရှည်ချလိုက်တယ်။ ခါးသီးတဲ့ ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့် အဲဒီသူပုန်လေး အကုသိုလ်ဆိုတာ အရမ်းကြောက်နေပြီ။ တနေ့မှာ ထောင်မှူးက သူ့ကိုယင်ကောင် အဖမ်းခိုင်းတော့ သူကမလုပ်နိုင်၊ တခြားဟာခိုင်းပါ တောင်းပန်တယ်။ ထောင်မှူးက သူ့ကိုအာခံတယ်၊ သူပုန်ထဖို့ ကြိုးစားတယ်ဆိုပြီး ဘယ်လောက်တောင် ရက်ရက်စက်စက်ရိုက်လိုက်လဲ မသိဘူး၊ တသက်လုံး လူစဉ်မမှီ ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတယ်။ သဂျီးလိုတွေးရင်တော့ ငနုံငအ၊ လူကြောက် လုပ်တုန်းကလုပ်ပြီး လို့ပြောမယ်ထင်တယ်။ ကျနော်ကတော့ ဖတ်အပြီးမှာ ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေပြော စကားကိုပဲ သွားသတိရမိတော့တယ်။
ရွှေဘိုသား ကြွက်ကို ၇ွာကခွေးခေါ်ပြီး လာဖမ်းပေးမယ်
သဂျီး က ဒီလိုဆိုတော့…
အခုချိန်မှာ လူတွေက အသိဥာဏ်အမြင့်ဆုံး သတ္တ၀ါ ဖြစ်တော့လည်း လူ့အသက်ကို မထိခိုက်ဖို့အတွက် ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ ဘေးရန်တွေကို ရှင်းပစ်တာပေါ့။ တချိန်မှာ လူထက် အသိဥာဏ်မြင့်တဲ့ သတ္တ၀ါ(ဂြိုလ်သားဆိုပါစို့) ပေါ်လာခဲ့ရင် လူဟာ ထို အသိဥာဏ်မြင့် သတ္တ၀ါရဲ့ အသက်အန္တာရယ် လုံခြုံမှုကို ထိပါးလာနိုင်တဲ့အတွက် ဒီလိုရေးသားမှုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။
ဒါဆိုရင် ကျုပ်တို့ ဂြိုလ်သားတယောက်အနေနဲ့ .တာဝန်ကျေတယ်…မှတ်..
(ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားရှိတယ်ပြောတယ် မျောက်တွေက လူတွေထက် အသိဥာဏ်အရမ်းမြင့်သွားပြီး မျောက်တွေက လူတွေ ကို တိရစ္ဆာန်လို ပြန်ဆက်ဆံတာ) ဇာတ်ကားနာမည်တော့ ဘာလည်းမသိဘူး။ သိတဲ့လူများ ရှိရင်ပြောပြပေးပါလား)
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနာမည်က မျောက် is wiser than လူ ….။
Planet of the Apes ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..
ကြည့်ရတာ.. ရုပ်ရှင်တွေအကြည့်များနေပြီး..တကယ်လည်း ကိုယ့်ဘ၀အထိအောင် အစွန်းအထင်းခံတယ်နဲ့တူတယ်..။
အဲဒီလောက်ကြီး…. ကြွက်ကိုယ်ထဲဝင်…ဂြိုလ်သားကိုယ်ထဲဝင်.. အတွေးနက်နက်နဲ့… စိတ်ကုးယဉ်စရာ… လိုက်တွေးစရာမလိုပါဘူး..။
ကြွက်ဆိုသည်မှာ.. လူကိုကောင်းကျိုးမပေးတာမို့…. ဒုက္ခရောက်စေတာမို့ … တွေ့ရင်သတ်လို့ပါပဲ..။
သတ်ရာမှာလည်း.. သတ္တ၀ါကို.. သေဟ..သေဟ..ဆိုပြီး..အညိုးကြီးကြီးနဲ့..ညင်းဆဲပြီး သတ်စရာမလိုပါဘူး..။
လူတွေကို ဒုက္ခပေးတယ်..သတ်တယ်..။ ဆိုတာမျိုးပဲ..။
၀မ်းကိုက်ဖူးမှာပေါ့… ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖျားနာဖူးမှာပေါ့..။
အဲဒီအခါမှာ.. ရောဂါပျောက်အောင်… အင်တိုင်ဘိုင်အိုးတစ်ဆိုတဲ့.. ပိုးသတ်ဆေး..ပဋိဇီဝဆေး သောက်တာမျိုးပဲ..။
အဲဒီလိုစိတ်နဲ့.. ဆေးပါတ်ပြည့်အောင်… တိတိကျကျလေးကို… လုံလစိုက်ပြီးဆေးသောက်ပါ.. ပိုးသတ်ပါ…။
ကြွက်ရန်ကာကွယ်ဖို့ ကြွက်ကိုမသတ်ဘဲ မလာအောင်လုပ်ရင် ပိုကောင်းမယ်
ကြွက်ပြေးနည်းတွေသုံးပြီး အိမ်ကိုလည်း သန့်သန့်ထားရမယ်
နောက်တော့ ကြောင်လည်းအသက်ကကြီးလာတော့ ကြွက်တွေက မလေးစားတော့ဘူး
ကြွက်ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါကတော့ အိမ်ရှင် အိမ်ငှားထက်တောင် ဆိုးတယ်တဲ့.. အိမ်ငှားကမှ နှင်ချရင် သွားတယ် ကြွက်က ဘယ်လောက် နှင်နှင် မသွားဘူး ရောက်ပြီးရင် ပေကပ်နေတာလို့ ပြောတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြောလေ.. ကြွက်တကောင် လိုက်ရှင်းနေတုန်းကတော့ သူတို့ ဟိုပြေး ဒီပြေးနဲ့ ကြွက်နဲ့ စိန်ပြေးတမ်း ကစားနေတော့ ရယ်မိတယ်။ ကြွက်ကလေး နေရာကနေ ခံစားကြည့်တော့ တော်တော် ကြောက်လန့်နေမယ်ဆိုတာ တွေးမိတယ်။
သူလည်း သတ္တ၀ါ နာတတ် ကြောက်တတ် လန့်တတ်မှာပဲ.. လူတွေကိုလည်း တခြားသော အင်အားကြီးတဲ့ သတ္တ၀ါကြီးတွေက ဒုတ်နဲ့ လိုက်ရိုက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ တွေးမိတာပါ.. ဥပမာ မျက်စိရှေ့မှာတင် သစ်ကိုင်းကျိုးကျသွားတာ မြင်ရင်တောင် လူပေါ်မကျပေမဲ့ အမလေး သိသိလေးနော် ဆိုပြီး လန့်ချင် လန့်နေကျမှာ.. လူတွေက ပိုပြီး ထိတ်လန့်တတ်ကြတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
အိမ်တွေမှာ ကြွက်များရင်တော့ ကြွက်ရောင်းရန် ရှိသည် စာရေးလိုက်ရင် ကြွက်တွေပျောက်ကုန်လို့လား ဘာလားတော့မသိဘူး။ အဲလိုတွေ အိမ်တွေမှာ ရေးတာတော့မြင်ဖူးတယ်။
လူတွေက ရယ်မောရင်း လိုက်ရိုက်ကြပေမဲ့ ကြွက်တကောင် အနေနဲ့ ဆိုလျှင် အသက်နဲ့ ရင်းပြီး လွတ်မြောက်ရာ ရှာရသလို ဖြစ်နေတယ်။ လာလမ်းကိုပဲ မမှတ်မိတာလား.. အတွင်းမှာပဲ ကောင်းစွာ ပုံးခို နေချင်လို့လား။ အစာရေဆာ လွယ်လင့်တကူ ရနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့လားတွေးမိတယ်။
ပေးစရာလည်းမြေမရှိ၊ ပေးစရာလည်းငွေမရှိ အခွင့်အရေးလည်းမရှိ အနာဂတ်လည်းမကျိန်းသေ
မြန်မာနိုင်ငံ ကြွက်သန်း(၆၀)ထဲမှာ တ၀က်ကျော်ကျော်ရှိနေပါတယ်။
နွားခြေရာ နောက်ကို လိုက်တဲ့ လှည်းဘီးလို ထပ်ချက်မခွာ လိုက်ပါပြီး သင်ပြုသည့် ကံသည် သင့်ထံ ပဲ့တင်လာအုန်းမည်။ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကြွက်တွေ ခုခံစားနေရတာကို အဲလိုကြေရရမှာလား?
ဦးလေး………… ရန်ရှင်း ဆိုတဲ့ နာမည်က အတိတ်နမိတ်ယူထားတာလား။
အမုန်းဆုံး၊ အရွံဆုံး အကောင်ပါ။ သူ့မျက်လုံးကို လုံးဝမကြည့်ရဲပါဘူး။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အတော်ကို ကြောက်ပါတယ်။
မမှီ ကြွက်နဲ့ မျက်လုံးချင်း ဆုံရင် ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်..
မပြောတတ်ဘူး ဆူးရဲ့ သူ့မျက်လုံးနီနီကို အတော်ကိုကြောက်တယ်။
ကျွန်မကတော့ ကြွက်ကို (ဘယ်ဘ၀ကရေစက်လဲမသိ) သဘောကျတယ် … ကြွက်မြင်ရင် မမောင်းပဲ အသာလေး ထိုင်ကြည့်နေချင်တယ် … တစ်ခါတုန်းက မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ညဘက်ကြီး ကြွက်က ဆီပုလင်းထဲက ဆီကို ခိုးသောက်နေတာ မြင်ဖူးတယ် … အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ် … အမြီးကို ပုလင်းထဲထည့်လိုက်တယ် … ပြီးတော့မှ ပြန်ထုတ်ပြီး အမြီးကို ပါးစပ်နဲ့ပြန်လျက်တာ …
မူကြိုမှာ တုန်းက ကဗျာ အတိုအစလေး နည်းနည်း မှတ်မိတယ်။
ကြိုးတန်းပေါ် ကြွက်ငယ်လျှောက် ပြုတ်ကျမှာ သူမကြောက်..
ဆူးလည်း မြင်ဖူးတယ်.. ငယ်ငယ်တုန်းက နေတဲ့ အိမ်မှာ ကြွက်က ဟိုပြေး ဒီပြေးနဲ့ ကြိုးတန်းတွေပေါ်မှာလည်း ပြေးတာ မြင်ဖူးတယ်။ အဲဒါနဲ့ မူကြို ကလေး ကဗျာလေး မှတ်မိနေမိတယ်။ ကြွက် ရဲ့ သွားတွေက တော်တော် ထက်တယ်နော်..
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်တုန်းက ငှက်တွေ ဆန်ကျွေးတာ ကြွက်တွေ ရောက်လာပြီး တနေ့ တနေ့ မြေကြီးတွေ ဖောက်လွန်းလို့.. မြေလှန်ပြီး အင်းဂဒေ ကိုင်လိုက်ရတယ်။ ပိုက်ချံတွေ ထွက်ကုန်တယ်။ စာကလေးတွေ ခိုတွေလည်း အစာငတ်ကုန်တယ်။ ကြွက်တွေကြောင့်ပေါ့.. အစာ ဆက်ကျွှေးရင် ကြွက် အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလို့..